यसरी हुनुहोस् तनावबाट मुक्त - Lite Nepal
यसरी हुनुहोस् तनावबाट मुक्त
तनाव एउटा यस्तो स्वास्थ्य समस्या हो, जसले ठीक कामलाई पनि बिगार्न सक्छ । तपाईंले पनि यो महसुस धेरैले गर्ने गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा जिन्दगीलाई समस्याबाट मुक्त बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ त ?
यसको लागि केही उपायहरु हुन्छन्, जसले दिमागलाई तनावमुक्त गराएर खुला दिमागबाट सबै काम सफल गराउन मद्धत गर्छ ।
जब तपाईं तनावमा हुनुहुन्छ । त्यसको समाधानको लागि सबैभन्दा पहिले यसको कारण खोज्नुहोस् ।
यदि सुरुमै कारण खोज्न सक्नुभएन भने यसले तपाईंलाई तनाव सिर्जना गराइरहन सक्छ । यसरी कारण पत्ता लगाइसकेपछि त्यो तनावको कारणलाई हटाउने प्रयास गर्नुहोस् ।
यसको लागि सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको कुनै कागजमा यी समस्याको बारेमा नोट गर्नुहोस् र यसलाई पटकपटक याद गरिरहनुहोस् ।
तनावबाट मुक्त हुने अर्काे उपाय भनेको आफ्नो उद्देश्यलाई सम्झिरहनुहोस् । जिन्दगीमा तपाईंले के चाहनुभएको छ ? त्यसलाई कहिलै नबिर्सिनुहोस् ।
जब तपाईंको लक्ष्य सधैं तपाईंको सामु रहन्छ, तपाईंले तनाव लिएर आफ्नो समय बर्बाद गर्नुहुन्न । त्यसैले, यदि तपाईंले तनावको सामना नगर्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईंको लक्ष्य तय गर्नुहोस् र त्यसको प्राप्तिको लागि केन्द्रित हुनुहोस् ।
यदि तनावले भावनामाथि नियन्त्रण गर्न सक्नुभएको छ भने तनाव पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ । भावनालाई नियन्त्रणमा लिनको लागि शान्त रहनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् ।
किनकि भावनालाई नियन्त्रण गर्दा तपाईंको दिमागमा तनाव सिर्जना हुने सबै किसिमका विचारहरु हटेर जानेछ । जसले तपाईंका तनाव कम गर्न मद्धत गर्ने गर्छ ।